Fampiharana sy lalao 10 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Fampiharana sy lalao 10 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ignacio Sala | | Fampiharana iPhone, App store, Lalao IPhone
Toy ny fitsipika ankapobeny, matetika aho dia manoro hevitra ireo rindranasa na lalao azo alaina maimaimpoana, fa amin'ity indray mitoraka ity, rehefa antomotra ny Krismasy, dia nino aho fa ny safidy tsara indrindra dia ny fanangonana azy ireo miaraka. Ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity lalao dimy sy fampiharana dimy sintonina maimaimpoana ao amin'ny App Store. Amin'ny fotoana famoahana ity lahatsoratra ity, ny fampiharana sy ny lalao rehetra dia azo amidy.
1 Arotsaho ny akoho 2
2 Ilay mpandeha an-tany
3 Adventure mihoatra ny fotoana
6 Rivotra misaintsaina momba ny rivotra sy torimaso ary feo fotsy
7 Blur Bokeh - Mazava ho azy ny vokam-sary
9 PhotoArtista - Solika
10 Drafitra anatiny ho an'ny iPad
Arotsaho ny akoho 2
Chuck dia voasambotry ny lohan'ny gidro ratsy fanahy. Mba handosirana ny sirkus dia tsy maintsy manampy an'i Chuck hanao fika antsitrika ao anaty pisinina ianao. Drop The Chicken dia misy piozila 100 izay hifalifaliantsika. Ny vidin'ny Drop The Chicken 2 mahazatra dia 0,99 euro ary manolotra anay ny fividianana fampiharana.
Ilay mpandeha an-tany
Akira dia ninja tanora an-dàlana ho tonga Sensei. Ny fomba tokana hahatratrarana ity fiafarana avo ity dia ny hahatafavoaka velona amin'ny pedestal mandritra ny telo minitra. Rehefa mandeha ny fotoana dia hanomboka hihetsika ny mpandeha an-tongotra fa tsy maintsy mitazona ny fandanjalanjana toa azy isika. Ny Pedestal dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 0,99 euro.
Ilay mpandeha an-tanymaimaim-poana
Adventure mihoatra ny fotoana
Adventure Beyond Time dia mandray mpilalao amin'ny dia mamakivaky nosy tsy fantatra. Lalao iray ahitantsika tontolo iainana 150 isan-karazany amin'ny fikarohana torolàlana izay ahafahanao mamaha ireo piozila hitanay eny an-dalana. Adventure Beyond Time dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro ao amin'ny App Store.
Adventure mihoatra ny fotoana€ 2,29
Andro vitsy lasa izay dia nandroso aho ary nampahafantatra anao fa ity lalao mahaliana ity izay hidirantsika ao amin'ny hoditry ny osy no fampiharana ny herinandro, ka ho afaka maimaim-poana izany hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Goat Simulator dia manana vidiny mahazatra 4,99 euro ao amin'ny App Store.
Cubway dia dia misy tantara tsy fantatra izay mamaritra ny tsingerim-piainan'ny fahaterahana indray. Tariho ny goba amin'ny lalana lava misy loza sy zava-tsarotra ary mitsidika toerana mahaliana sy mistery maro. Cubway dia manana vidiny ao amin'ny App Store 2,99 euro.
Rivotra misaintsaina momba ny rivotra sy torimaso ary feo fotsy
Ho an'ireo olona rehetra te-haka minitra vitsy hiala sasatra dia Windy no fampiharana anao. Windy dia manome antsika rakipeo voajanahary miaraka amina zavakanto kanto manampy anao hatory, hiala sasatra, hianatra na hisaintsainana. Windy dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro.
Feo matory tabataba fotsy misy rivotra€ 2,29
Blur Bokeh - Mazava ho azy ny vokam-sary
Ny vokan'ny Bokeh dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana be mpampiasa indrindra tsy amin'ny sary ihany fa koa amin'ny sinema, rehefa te-hisarika ny saina amin'ny teboka iray eo amin'ilay sehatra ianao fa tsy misy fanelingelenana. Amin'ity rindranasa ity dia azontsika atao ny manazava ny any ambadika ankoatran'ny manampy teboka hazavana samihafa hamoronana io vokatra io. Misy vokany 85 hahafahana mampifanaraka tsara ny sarinay amin'ny farafaharatsiny. Blur Bokeh dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro ao amin'ny App Store.
Blur Bokeh€ 3,49
Feelca Colores dia manampy bebe kokoa ny loko misy ny loko amin'ny horonantsary taloha, manome antsika valiny izay mihoatra ny fahalianana indraindray. Ho anao rehetra izay tia sivana, ity fampiharana ity dia mety ho fahitana vaovao sy manan-danja. Felca Colors dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro ao amin'ny App Store.
Feelca C€ 1,09
PhotoArtista - Solika
Araka ny asehon'ny anarany, noho ny PhotoArtista - Solika dia azontsika atao ny manova ny sarintsika ho lasa canvases tsara tarehy hanonta azy ireo toy ny hoe sary hosodoko. PhotoArtista dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 4,99 euro.
PhotoArtista - Solika€ 5,49
Drafitra anatiny ho an'ny iPad
Araka ny lazain'ny anarany, ny Interior Design dia fampiharana ho an'ny endrika anatiny, rindranasa miaraka amina mpampiasa tsotra tena tsotra izay ahafahan'ny tsirairay mamolavola na manomana fanavaozana ao anatin'ny minitra vitsy. Interior Design for iPad dia manana vidiny mahazatra 7,99 euro ao amin'ny App Store.
Drafitra anatiny ho an'ny iPadmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Fampiharana sy lalao 10 maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ahoana ny fomba ahazoana an'i Luigi, Toad, Yoshi ary Toadette amin'ny Super Mario Run